MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ဖားကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲဖြစ် ဗမာစစ်သား (၈) ဦးသေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော ဖားကန့် ဒေသ နမ့်မဖစ်မော်အနီး တွင် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက် ည (၁၁း၄၅) နာရီ အချိန်တွင် လုံးခင်းဘက်မှ ထိုးစစ် ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ်ကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များကနေပြီး မိုင်းများဖြင့် ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် ဗမာအစိုးရစစ်သား (၃) ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အောက်တိုဘာ (၉) ရက်နေ့မှာပင် ဖားကန့်ဒေသ (၆) မိုင်နှင့် (၇) မိုင်ရွာကြား ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၆) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားရာ ဗမာစစ်တပ်မှ (၅) ဦး သေဆုံး ကြောင်း ဆက်လက်သတင်းရရှိပါသည်။
There were (3) Burmese Government invader soldiers killed in Nam Mahpyit Jade Mine, near Hpakant region , which is under KIA (2) brigade areas, western Kachin State on 9th October, 2012, according to the KIA front-line officer. When the huge Burmese soldiers invaded at the Nam Mahpyit jade Mine area, the KIA (6) battalion waited and attack with land mine at 11:45 PM on that day.
Moreover, there wasabattle between KIA (6) battalion and Burmese troops between (6) and (7) miles villages, on 9th October. (5) Burmese soldiers killed at the battle.
at 10/11/2012 01:43:00 PM